Khin Aung Aye | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: Khin Aung Aye
မူရာကာမိများအတွက် သောကြာနေ့ (ခင်﻿﻿အောင်﻿﻿အေး)
အဲဒီကိစ္စဟာ မရှင်းဘူး ရှင်းပြနေတာကိုက မရှင်းတာ
ဥပမာ နေရောင်ခြည်ထဲ ရောဂါပိုးတွေ တွေ့တယ်ဆိုတာမျိုး
ဖိနပ်ထဲ ပူးလေးတစ်ကောင်ဝင်ပြီးတော့ ၀ပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုး
အများအားဖြင့် သောကြာနေ့တွေမှာ လပ်လျားလပ်လျား ပါပဲ
စုံမ ၀ှက်တမ်းကစားသလို ပြုံးဖြီးဖြီးကြီးနဲ့ လမ်းရဲ့ထောင့်ချိုးမှာ
ကွေးကောက်နေခဲ့တယ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ကွေ့ကောက်နေတာလဲ
ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ ဘာကမှ ရေရာတယ် တိကျတယ်ရယ်လို့မှ မရှိတာ
တစ်နေရာရာမှာ အမြီးအမောက်မတည့်မှုဟာ ဟိုဖက်စာမျက်နှာကျ
သံလွင်ဆီ အစိမ်းရောင် မီနီစကတ် နောက်တစ်နေရာမှာ ကပေါက်တိ
ကပေါက်ချာနိုင်မှုဟာ ဟိုဖက်ရပ်ကွက်ထဲကျ ‘အက်စ်ချလာ့စ်ရဲ့အလွမ်း
ပြဇာတ်များ’ မိုးတွေ ရုတ်တရက် ရွာကျ မလာဘူးလို့ ဘယ်သူက အာမခံ
နိုင်မှာ မို့လို့လဲ ကျုပ်လည်းတွေးတာပဲ သွားကြားထိုးတံ ၁၇ ချောင်းတိတိ
ကုန်သွားတယ် မရေရာဘူး မရေရာဘူး ဘာမှ မရေရာဘူးလို့ အဓိပတိ
အထူးဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ရေရွတ်ရင်း ဒရောသောပါး အူတိအူကြောင်ဖြစ်ခြင်း
ဟာ သိမှုရဲ့ဘယ်ဖက်အံဆွဲထဲကနေ အန်ကျလာတယ် ဆီးအိမ်တင်းလာပြီး
အနံ့ပြင်းတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်လို ဒါမှမဟုတ် ‘ရွှေဖရုံသီးညောကီ’ တစ်ပွဲလို
နားတစ်စုံက ဆကုရ တာဝါ အပေါ်ထပ်က ကဖေး ဘရစ်စတိုမှာ ချိတ်လို့
ကင်းဝေးသလို နေနိုင်တယ် အပူအပင်မရှိဘူး လျှာမှာအရိုးမရှိသလိုပဲပေ့ါ
နောက်ပြီးတော့ သွားလေရာဆောင်သွားဖို့ တွယ်ချိတ်တစ်ချောင်းရယ်
တရုတ်ပဲမုန့်သေးသေးလေးတွေရယ် ဟိုး အိမ်ထောင်ကျကာစကတည်း
က မပျောက်မပျက်သုံးစွဲလာတဲ့ နားဖာကလော်ရယ် ဒီကနေ့အိပ်ယာက
စောစောမထဖြစ်ဘူး အိပ်ယာဘေးမှာ စာအုပ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေ ဓါတ်ပြား
တွေ ခဲတံနဲ့ ဆွယ်တာ ပြီးတော့ သစ္စာရှိတဲ့ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိမှု အားလုံး
ဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သိပ်ပြီးတော့ မကွာခြားလှချေဘူး တကယ်လို့များ
ကြံစည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရင်တော့ ဒီသောကြာနေ့မှာ အလုပ်မဆင်းဘူး။ ။
၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၄ ကျောက်မြောင်း၊ ရန်ကုန် ၁၀း၂၇ နာရီ
Categories: Kabyarz | Tags: ခင်﻿﻿အောင်﻿﻿အေး, အက်﻿ပီဖနီ, Epiphany, Kabyarz, Khin Aung Aye | Permalink.
အီဖယ်လ် မျှော်စင်ကြီး ဖြစ်လာတော့တာပေ့ါ
ဘာလင်၊ ပါရီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတချို့
မသိဖြစ်ရမြဲ ထူလဗျစ်ဝက်ခြံလို ချည်ခင်အစအနများ
အယုဒ္ဓယမြို့ဟောင်းရဲ့ အချို့နေရာမှာ ခမ်းနားခြင်းတွေ
ရှေ့ဆောင်လေဆိပ်ဝန်ဆောင်မှု ကဗျာကို စာလုံးပေါင်းရန်
နေ့အပူချိန်များ အထူးမြင့်မားလာခိုက် မှာ ကွန်မြူနစ်ပြောက်
ကျားများက ဖိလစ်ပိုင်မြို့တော်ဝန်တစ်ဦးကို ပစ်သတ်ခဲ့တယ်
ဘယ်မှာမဆို အချစ်ဟာ ﻿သေးသိမ်လွန်းတယ် တိုင်း ဒေသကြီးမှာ
ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာလီကမ်းခြေ တစ်နေရာရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်
ထုတ်လုပ်ရာမှ လွင့်လာသည့် အမှုန်အမွှားများ သတ္တုရိုင်းများအား
သူ့ဝက်အူချောင်းက နည်းနည်းနောနောကြီး မဟုတ်ပါဘူး
အီနာဂါကီသည် မိခင်ကို ရေနွေးအိုးဖြင့် ထုသတ်ပြီးနောက် —
၄ မေလ ၂၀၁၄ ဗဟိုရ်လမ်း၊ ကျောက်မြောင်း ၂၀း၄၄ နာရီ
(စာမျက်နှာ ၃၁) Continue reading →
သြဂုတ်လ နှစ်ဆယ် ပြီးတဲ့အခါ
သြဂုတ်လ နှစ်ဆယ့်နှစ်လို့ လုပ်လို့ မရဘူးလေ
အီးအာရ်အေ 1101 ပေါ်ပြီး သုံးဆယ့်နှစ်နှစ် အကြာ
ဖာဒေယက်မှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် မှုန်ငေးနူးညံ့သော
မျက်လုံးများဖြင့် ပြောရလျင် မိုးကလည်းခေါင် ဝမ်းလည်း
ဟောင်၍ ပူလောင်ကြေကွဲ.. အချိုးကျ ပီအာရ်စံနစ်ကို အတည်
ပြုရန် သဲလွန်စ ယူ၍ သမ္မတက အရက်သိပ်ကြိုက်တယ် စနစ်
နှင့် စစ်အာဏာရှင် စနစ် အလျဉ်းသင့်လို့ ပြောရရင် မက္ကလိုး
ဒီကဗျာရေးတဲ့ ခေတ်ကာလက စိတ်ညစ်အရက်မူးပြီး သူ့လက်
ကို သူ တူနဲ့ထုမိတဲ့အခါ လင်မယားအရာမြောက် နေခွင့်မရ
သည်မှာ သေချာ၏ တစ်ပတ်ခန့် အချိန်ကုန်သွား၏ “နွေဦး
မနက်ခင်း တစ်ခုအကြောင်းဖွဲ့ရတာ လွယ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ
ဒီလိုဖွဲ့ကြမှာမှ မဟုတ်တာ။ ဒါပေမယ့် နွေဦးမနက်ခင်းတစ်ခုလို
သာယာဖို့၊ ကြည်လင်ဖို့၊ တည်ငြိမ်ဖို့ဆိုတာကတော့ သိပ်ခက်
တာပဲဗျာ” သြဂုတ်လ နှစ်ဆယ် ပြီးတဲ့အခါ သြဂုတ်လ နှစ်ဆယ့်နှစ်
လို့ လုပ်လို့ မရဘူးလေ သို့သော် မျက်မှန်က ဖျက်လှသည်။ ။
၂၀ သြဂတ်စ် ၂၀၁၄ ကျောက်မြောင်း၊ ရန်ကုန် ၂၃း၂၉ နာရီ
လူများ၊ သက္ကရာဇ်များ – ဘ၀ စာအုပ်ထဲမှ များများ၊ ဂျာနယ်တစ်စောင်နှင့် ကြည်အေးဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်ထဲမှ နည်းနည်း ကိုယ့်ကဗျာအားစိုက်မှု အနေတော် တို့ဖြင့် ရေးဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Khin Aung Aye @Facebook
Categories: Kabyarz | Tags: ခင်အောင်အေး, Kabyarz, Khin Aung Aye | Permalink.
ထွေးပိုက်ထား ဖို့မျှ –
(ကိုယ်က မင်းကို ပြန်ပေးတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါ)
ကြမ်းပြင်ပေါ် ခွေကျလုနီးပါးဆီက ကုန်းရုန်းထခဲ့ပါ့မယ် … ။
အဆင်သင့်သာ ပြင်ထားပေတော့ … ။ ။
၉၊ ဇွန်၊ ၂၀၁၃
တွင်းန်ဘရွတ်ခ်၊ မေရီလင်းန်ဒ်၊ ၂၁း၄၄ နာရီ။
(သင်၏ သစ္စာရှိသော – ခင်အောင်အေး။ သြဂုတ် – ၂၀၁၃၊ နှစ်ကာလများ။)
Categories: Kabyarz | Tags: ခင်အောင်အေး, Kabyarz, Khin Aung Aye, Yours Faithfully | Permalink.
တိမ်တစ်အုပ်ရဲ့ ရှေ့မှာ ကျွန်မ ရပ်လိုက်တယ်
တိမ်တွေဟာ ကျွန်မ ကိုယ်ခန္ဓာကို တိုးတိုက်ဖြတ်သန်းပြီး
သူတို့လိုရာခရီးကို မထစ်မငေါ့ ဆက်လက် ရွေ့မျောသွားကြတယ်
ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ရဲ့ ရှေ့မှာ ကျွန်မ ရပ်လိုက်တယ်
ကြောင်ကလေးက ကျွန်မ ခြေဖမိုးတွေကို ပွတ်သီးပွတ်သတ်လုပ်ရင်း
‘ညောင်’လို့ တိုးတိုးလေး ညည်းကာ သူ့ကိုမချီပိုးမချင်း ချွဲနွဲ့နေတယ်
စာအုပ်စင်တစ်စင်ရဲ့ ရှေ့မှာ ကျွန်မ ရပ်လိုက်တယ်
စာအုပ်တွေထဲက စကားလုံးတွေ စာပိုဒ်တွေ အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေဟာ
ခုန်ထွက်လာကြပြီး ကျွန်မကို ဒေါသတကြီး ရန်တွေ့နေကြတယ်
မင်း ဘာလို့ ငါတို့ကို မဖတ်တော့တာလဲတဲ့
ပန်းချီကားတစ်ချပ်ရဲ့ ရှေ့မှာ ကျွန်မ ရပ်လိုက်တယ်
အရောင်တွေဟာ ရောင်ခြည်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားကြတယ်
မျဉ်းတွေဟာ ကြိုးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားကြတယ်
ကျွန်မ မူးမေ့ လဲကျသွားခဲ့တယ်
ဒီအငွေ့အသက်တွေ တစ်သက်လုံးလိုလို မှိုနံ့
အရိုးပေါ် ဆိုင်းထားတဲ့ အရေပြားတစ်လျှောက်လုံး
တစ်နေ့ချင်းတွေနဲ့ သီရက်ထားတဲ့ နှစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး
ဆွံ့အမှုတွေသာ အသံပြုနေခဲ့ရတဲ့ မှတ်တမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်လုံး
မင်းလည်း ငြီးငွေ့မှာပဲ လေးတွဲ့တွဲ့ ခေါင်းလောင်းသံတွေ တအီအီနဲ့
ပြိုလို့ ပြိုမှန်းမသိတဲ့ မိုးတိမ်တွေနဲ့အတူ နုံးခွေလဲကျလို့
မင့် ငြီးငွေ့မှုဟာ ငါ့ တစ်ကိုယ်လုံးပေါ် တရှိန်ရှိန် အဖျားတက်လို့
ရာသီတစ်ခွင်လုံး ပေါ့ပါးလိုက် လေးလံလိုက် ရွှဲစိုလိုက်နဲ့ အငြိအခိုက်များ
ယာခင်းအသစ်ကို ထိုးလှန်လိုက်တဲ့အခါ အလိပ်လိုက် မြေဆီလို ခံတွင်းပျက်မှု
ချိတ်ယူလိုက်တဲ့ခါ ဒရွတ်တိုက် ပဲ့ရွဲ့ ပြုတ်ကွာကျ လာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှယ်
ယုံစရာ မရှိခြင်းတွေသာ လဲမှို့ပွင့်တွေလို နေရာအနှံ့ဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ်
တိုးရှည်စွန်း တစ်ခုဆီ တိုးရွေ့
ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော ခေတ်တွေကို စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးပြီ
သေနတ်သံ တဒိုင်းဒိုင်းကြားထဲ လိမ္မာပါးနပ်စွာ
ပြားချပ်ခဲ့ဖူးပြီး အခု ငါ့ဝရန်တာ လက်ရန်းပေါင်ပေါ်
မင်း ရွှင်ပျော်မြူးပြဇာတ်ကို ငါက ရေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်
လောင်းရင်း အပျင်းဖြေနေရပုံဟာ ဒုက္ခတစ်ကွေ့လိုလို။ ။
၂၆၊ ဇွန်၊ ၂၀၁၃
ဖရာ့ပရာဒင်န်၊ ဘန်ကောက်၊ ၂၄း၀၄ နာရီ။